Sida loogu qaado sawirro muuqaal cajiib ah mobilada gacanta ee Android | Androidsis
Manuel Ramirez | | Codsiyada Android, Sawir, Khiyaamada Android
Iyada oo leh Galaxy Note 10 + waxaan ku baran doonnaa sida loo qaado sawirada ugu macquulsan ee sawir gacmeedka mobilada Android. Tan waxaan u adeegsaneynaa laba codsi oo gaar ah oo noo oggolaan doona inaan ku helno midka ugu fiican midka ugu fiican sawir gacmeedka.
Qaybta ugu fiican, maahan inaan wax ficil ah sameyno, marka laga reebo inaan ogaano sida wax yar loogu fiirsado goobta, maadaama wax waliba ay yihiin arrimo u isticmaal barnaamijyada ku habboon mid kasta oo ka mid ah labada geeddi-socod in aan sameyn doonno oo aan sidaas ku haysanno sawirkaas saxda ah ee aan ku wadaagno shabakadaha bulshada iyo barnaamijyada lagu sheekaysto.
Sida loo qaado sawirrada ugu fiican sawir gacmeedkaaga moobaylka
Dhinaceena waa inaan kaliya ogow sida wanaagsan ee goobta loo diyaariyo. Qaabka sawirka, waa in laga soo qaato mowduuca sagxada si looga tago inta ka hartay sawirka goobta u adeegi doonta asalka iyo taas oo aan ku dabaqi doonno saameyn cakiran.
Inta soo hartay waa in taas la siiyaa gaar ah ama taabasho sixir ah si loo cabbiro sawirka iyo in ay jirto wada noolaansho weyn oo ku saabsan laydhadhka iyo hooska iyada oo aan luminaynin midabaynta midabka
Khiyaanada sida loo sameeyo sawirada ugu fiican ee sawir gacmeedka ah ee laga helo mobilada Android waa inaad ka qaadataa laba codsi oo heer sare ah: Google Camera ama Gcam iyo PS Camera. Markii ugu horreysay waxaan adeegsannay deked waxaan horey uga hadalnay dhowr bilood kahor taasina waa nooca ZGCAM 3.8.00622 oo sifiican uga shaqeeya kiiskan Xusuusin ah 10+. Sidoo kale waa loo heli karaa mobilada kale, sidaa darteed waa arrin u socota websaydhka ZGCAM.
De Adobe Photoshop Camera ayaan horeyba uga soo hadalnay marar badan oo uu hadda noqday abka ugufiican ee lagu dabakho saamaynta iyo miirayaasha mahadsanid Adobe Artificial Intelligence oo loo yaqaan Adobe Sensei.
Halkan waxaan ku aragnaa labada tallaabo ee sawirrada:
Waxaan ula jeedaa, maxaan isticmaali doonaa GCAM ama Google Camera loogu talagalay qaabka sawirka oo sidaas awgeed aan ku qabsanno mawduuca aan dooneyno inaan soo bandhigno. Waxaan ku sameynaa qaabka sawirka maxaa yeelay waxay ka dhigeysaa meesha ugu wanaagsan ee xilligan laga helo moobiilka (fiiri caqliga ka dambeeya sawir qaadista xisaabinta ee barnaamijkan). PS Camera waxaan u isticmaali doonaa inaan ku siino hagaajintaas in barnaamijkani si otomaatig ah u sameeyo taasina waxay sameynaysaa saameyn layaab leh oo uu ugu mahad celinayo Adobe Sensei. U tag iyada:
Waan soo dejineynaa halkan laga bilaabo APK waxaa qoray GCAM
Waxaan ku talinaynaa taas codso mid kasta oo ka mid ah talaabooyinka si aad uhesho qaabeynta GCAM isla qoraalkaas
Hadda waxaan rakibnaa barnaamijka Adobe:
Markii aan labadeenaba rakibnay waxaan qaadan doonnaa GCAM si aan u dooranno qaabka Sawirka
Waxaan qaadnaa sawirka waxaanan si fiican u eegaynaa labada uu sameeyay waxaan doorannaa cilladda. Waxaan arki doonnaa in astaanta qarxan ay ka muuqato sawirka kamaradda Google iyo in marka aan fureyno sawirka, ay labo soo muuqanayaan. Waxaan raadineynaa midka leh xiddigta astaamaha.
Hadda waxaan fureynaa barnaamijka Adobe Photoshop Camera
In interface ugu weyn waxaan ku arki doonnaa midigta hoose ee thumbnail qabashada aan qabanay
Waxaan riixnaa oo waxaan dhaafi doonnaa kahor gallery sawirada in la xusho midka aan dooneyno inaan dib u hagaajinno
La xushay waa inaanan waxba qaban, tan iyo PS Camera ayaa daryeeli doonta adeegsiga saamaynta kobcinta
Como Waxaad ka arki kartaa sawirrada ku lifaaqan horumar weyn ayaa lagu xusay iyo sawirka oo dhan wuxuu qaadanayaa isafgarad weyn, oo muujinaya meelaha banaan ee hoosku uusan faahfaahin faahfaahin.
Iyo sawirka ugu dambeeya:
Oo sidaas, iyadoo la adeegsanayo labadan codsi, waxaan qaadan karnaa sawirada ugu fiican ee hadda jira. Haddii aad horey u laheyd hibo aad u leedahay sameynta goobta, xitaa waad horumarin kartaa si aad uga dhigto kuwo aan iin laheyn. Iyo hal shay, caqliga ka dambeeya qaabka Sawirka Sawirka Google Camera ayaa ku dhammaaday ka shaqeynta Adobe, markaa waxaa laga yaabaa in dhowaan aan ku helno sixirkiisa isla PS Camera.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » [VIDEO] Sida loogu qaado sawirrada ugu fiican sawir gacmeedka moobilkaaga Android
Sida loo kiciyo habka hurdada ee Android
Xiaomi Mi 10 Ultra iyo Redmi K30 Ultra laguma iibin doono meel ka baxsan Shiinaha